उद्देश्य र लक्ष्यविहीन बिमस्टेकको आैचित्यमाथि प्रश्न, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
उद्देश्य र लक्ष्यविहीन बिमस्टेकको आैचित्यमाथि प्रश्न
डिसी नेपाल , १८ भाद्र २०७५
भर्खरै सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) राम्रो र रोचक भएको छ। बंगालका खाडी आसपासका मुलुकहरुका बीचमा आर्थिक विकास, व्यापारिक सहजीकरण लगायतका विषयका लागि सातवटा मुलुकहरुले आपसमा सल्लाह गरेर यो समूह स्थापना गरिएको हो । यद्यपि यो समूहको चौथो सम्मेलन सम्पन्न भइसक्दासम्म यो बिमस्टेक कुनै पनि नामबाट कहीँ पनि दर्ता छैन।
अर्को कुरा यो बिमस्टेकको स्पष्ट उद्देश्य र भिजन अहिलेसम्म देखिएको छैन। बिमस्टेकले चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्दासमेत आफ्नो बडापत्र जारी गर्न सकेको छैन। यसको कुनै विधान छैन। यो सातवटा मुलुकको कस्तो संगठन हो? जसको चौथो शिखर सम्मेलन हुँदासम्म यसको विधान छैन, भिजन छैन, दर्ता छैन, सचिवालय छैन, वडापत्र छैन। यो सातवटा मुलुकको कस्तो बिमस्टेक सम्मेलन हो?
चौथो शिखर सम्मेलन हुँदासम्म यसको विधान छैन, भिजन छैन, दर्ता छैन, सचिवालय छैन, वडापत्र छैन। यो सातवटा मुलुकको कस्तो बिमस्टेक सम्मेलन हो?
एकअर्का मुलुकले आयोजना गर्छन्, भेला हुन्छन्, अब यसो गर्ने भन्छन्। सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय र कार्यकारी स्तरीय बैठक गरिन्छ, यसो गर्ने र उसो गर्ने भनिन्छ । भाइचारा र सद्भावको हिसावले राम्रै भइरहेको छ। आजसम्म संसारमा स्थापना भएका यसरी समूह राष्ट्रहरु र समूह राष्ट्रका संगठनहरु, उनीहरुले गर्ने काम कारवाहीमा भिजन हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ। तर, बिमस्टेकको कुनै भिजन र दृष्टिकोण पनि देखिँदैन।
अधिकांश सार्क मुलुकका सदस्यले अन्य दुई मुलुकलाई थप गरेर कतै सार्कको उद्देश्य र सार्कको गतिशीलतालाई साइड लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका धेरै बुद्धिजिवीले गर्न थालेका छन्। त्यो होइन भनेर सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले स्पष्टीकरण दिनु परेको छ। नजानिँदो रुपमा यी विषय पनि विवादित हुन पुगेका छन्।
त्यस कारण आगामी दिनमा बिमस्टेकको विधान बनाउने, सचिवालय गठन गर्ने, दर्ता गर्ने, बडापत्र जारी गरेर सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत विशेष गरी तेस्रो मुलुक यो संगठन माथि भर पर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। आपसका समस्या समाधान गर्न आपसी हित र आफ्ना मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई यो संगठनलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। तर चौथो सम्मेलन सम्पन्न भइसक्दासम्म पनि यी माथि उल्लेख गरिएका कुरा संभव देखिएन। तर आगामी दिनमा भने ती कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन् र यो संगठनले गरोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ।
चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले हिमालदेखि बंगालको खाडीसम्म व्यायारिक र यातायातका मार्गको प्रयोग र स्वास्थ्य र शिक्षामा एक आपसमा आदान प्रदान गर्न सकियो भने यसको उपयोगिता बढ्न सक्छ।